Ukunikeza Tapered mqengqeleki Ukunikela, Deep Groove Ball Ukunikela, Umqamelo Block Ukunikela - Xinri
Senze uhlolo olungqongqo lwendawo nganye kwaye sithwele, sizama ukungabinangxaki esemgangathweni ezandleni zabathengi.Funda ngokugqithisileyo
Iiyure ezingama-7X24 ngomnxeba okanye ngenkxaso yetekhnoloji ye-intanethi simahla. Inkonzo ye-OEM / eyenziwe ngentando yamkelwe.
Ukuthengisa ngokuthe ngqo kumzi-mveliso, akukho mahluko phakathi kwamaxabiso.Funda ngokugqithisileyo
I-Linqing XINRI Precision ethwele i-Co, Ltd.yinkampani egxile kwi-tapered roller bearing, cylindrical roller bearing, ibara ye-groove enzulu, ibhloko yomqamelo ethwele, i-wheel hub ethwele kunye ne-intshi engeyiyo imigangatho yokuvelisa imveliso. Inkampani inendawo epheleleyo ngaphezu kwe-2 yezigidi zeenyawo zecala, abasebenzi abakhona abangama-500, baneentlobo zonke zezixhobo zokwenza izixhobo zentsimbi eziqhubela phambili ngaphezulu kweeyunithi ezingama-360, izixhobo zokuvavanya izixhobo ezingaphezu kwama-240, ngoku sisafuna iarhente yohlobo lweXRL yethu kwihlabathi liphela, ukuba unomdla, nceda unxibelelane nathi ngqo.
I-XRL sele ithengisiwe kumazwe angaphezu kwe-120 kwihlabathi liphela. Nokuba zezolimo, ukuveliswa kwamalaphu, ukumbiwa kwemigodi, ukuprinta usetyenziso olwahlukeneyo kwizikhululo zeenqwelo moya, kwiinkqubo zokumisa umoya, ukuhambisa izixhobo, isikhululo samandla senqanawa, ithoyi okanye izixhobo zoNyango, iMoto, iXRL ayibonisi nto ingaphantsi kweyona ndawo iphakathi yexabiso eliphambili lentengiso. .
I-XRL ithengise ngaphezulu kwamazwe ayi-120
Izigidi ezili-150 +
Ukuthengiswa konyaka kwehlabathi ngaphezulu kwe-150 yezigidi zeedola
700 yezigidi +
Imveliso yangaphakathi yangaphakathi idlula iiyunithi ezizigidi ezingama-700
Sifumene iSatifikethi seNkqubo yoLawulo loMgangatho.
SINGUMvelisi ovelisa iingcali
Isantya esiphezulu ubushushu obuphezulu
Ubomi benkonzo ende kulula ukuyigcina
Ngaba unako ungenziwa ngemfuneko
Sinikezela uluhlu olupheleleyo iibheringi kubandakanya iibheringi mqengqeleki Tapered, Deep iibheringi ibhola groove, iibheringi Pillow block, iibheringi mqengqeleki zezindlu, iibheringi mqengqeleki ukulenza, iibheringi hub Wheel kunye nabanye. Kwaye ukusuka kwiibheringi ezincinci ezinobubanzi obungaphakathi be-20mm ukuya kwiibheringi ezinkulu ezinobubanzi obungaphandle be-500mm. Ukongeza iibheringi ezisemgangathweni, sikwavelisa iibheringi ezingaqhelekanga.
Ngaphezu koko, sikwangumenzi weRashiya LADA, TZA, VPZ, SPZ, VBF kunye neKG, kunye nabanye. Ngeli xesha, sinokubonelela ngenkonzo ye-OEM.
2. Njenge-ISO9001: Umenzi oqinisekisiweyo ka-2000, sasisekele inkqubo yokulandelelwa kwemveliso. Ngaphandle koko, i-XRL Co., ineqela lezobuchwephesha elinamandla kunye nejineli yaseJapan ukusombulula iingxaki ezahlukeneyo ekusetyenzisweni nasekusebenziseni iibheringi zethu.
3. Ukuqinisekisa umgangatho: iinyanga ezili-12 zewaranti esemgangathweni, imali inokutsalwa okanye ibuyiselwe imali ukuba kukho ingxaki esemgangathweni.
1. Sinezixhobo zovavanyo lodidi lokuqala lokufumana iiparameter ezahlukeneyo zedatha kunye nokulawula umgangatho wokuthwala. Nanini na xa iibheringi kufuneka zibhaqwe kuqala ukuba umgangatho ufaneleka kwaye ukuthwala okungafanelekanga kuya kususwa ngokuthe ngqo. Ke sinokufumana ukuthembela kumthengi omkhulu, kwaye sibabonelele iminyaka eliqela.
2. Sinezakhono zethu ze-R & D, ukunceda abathengi basombulule ingxaki yeebheringi ezingaqhelekanga. Sinokutshintsha uphawu lomthengi ngokweemfuno zabo.
3. Sinokuqinisekisa ukuba amaxabiso ethu asengqiqweni xa uthelekisa neebheringi ezikumgangatho ofanayo e-China. Kungcono kuwe ukuba uthelekise amaxabiso kunye nomgangatho phakathi kwabathengisi. Kodwa wonke umntu uyazi ukuba awunakuthenga iimveliso ezisemgangathweni ophezulu ngexabiso eliphantsi, kodwa ukuthwala kwethu ngowona mgangatho uphezulu ukuba usebenzisa ixabiso elilinganayo.
Sele sibeke iarhente kumazwe akuMzantsi Melika afana nePeru kunye neAfrika amazwe afana neKenya neZambia, ngoku sisafuna iarhente yohlobo lweXRL yethu kwihlabathi liphela, ukuba unomdla, nceda unxibelelane nathi ngqo.